किन प्रदान गरियाे नोबेल शान्ति पुरस्कार इथियोपियाका प्रधानमन्त्रीलाई ? – Hotpati Media
किन प्रदान गरियाे नोबेल शान्ति पुरस्कार इथियोपियाका प्रधानमन्त्रीलाई ?
२४ आश्विन २०७६, शुक्रबार १९:२२ मा प्रकाशित (7 महिना अघि) अनुमानित पढ्ने समय : ७ मिनेट
एजेन्सी-इथियोपियाका प्रधानमन्त्रीले यो वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार जितेका छन्। स्वीडिस एकेडेमीले सन् २०१९ को नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेताको घोषणा शुक्रबार गरेको हो।
इथियोपियाका प्रधानमन्त्री एबी अहमदलाई शान्ति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको क्षेत्रमा गरेको योगदानका लागि नोबेल शान्ति पुरस्कार प्रदान गरिएको स्वीडिस एकेडेमीले उल्लेख गरेको छ।
इथियोपिया र एरिट्रेयाबीच गएको वर्ष शान्ति सम्झौता भएको थियो। यो शान्ति सम्झौताले २० वर्ष लामो सैन्य हिंसा अन्त्य गरेको थियो। सन् १९९८–२००० को सीमा युद्धपछि इथियोपिया र एरिट्रेयाबिच हिंसाको अवस्था थियो।
पुरस्कार बापतको ७ लाख ३० हजार पाउण्ड स्ट्रलिङ्ग उनलाई आउँदो डिसेम्बरमा ओस्लोमा हुने विशेष कार्यक्रमकाबीच हस्तान्तरण गरिने छ।
नोबेल शान्ति पुरस्कार जित्ने एबी अहमद १०० औँ व्यक्ति हुन्। यो अवधिमा नोबेल शान्ति पुरस्कारका लागि ३०१ जना तथा संस्थालाई मनोनित गरिएको छ। २ सय २३ व्यक्ति र ७८ संस्था रहेका छन्।
यो वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार जलवायु परिवर्तनका लागि तत्काल काम गरिनु पर्ने पक्षमा वकालत गर्दै आएकी स्वीडेनकी किशोरी ग्रेता थुनबर्गले जित्ने आँकलन गरिएको थियो। तर उनले नोबेल शान्ति पुरस्कार जितिनन्।
यो वर्षको पुरस्कार जितेका एबी सन् २०१८ को अप्रिलमा इथियोपियाका प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। उनले हजारौँ विपक्षी अधिकारवादीलाई जेलबाट रिहा गरेका थिए।